एसपी र एसएसपी सरुवाको गृहकार्य अन्तिम चरणमा , को कहाँ सरुवा हुँदैछन् ? – ZoomNP
एसपी र एसएसपी सरुवाको गृहकार्य अन्तिम चरणमा , को कहाँ सरुवा हुँदैछन् ? प्रकाशित मिति: आइतवार, मंसिर ०५, २०७३ समय - ८:५१:१० काठमाडौं, ५ मंसिर । गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकारीहरूको सरुवा तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा गर्ने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा भए पनि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी तथा महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालबीच बिहीबार अबेरसम्म एसपी सरुवाको विषयमा छलफल भएको हो ।
आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ– गृह र प्रहरी नेतृत्वबीच शुक्रबार एसपीको सरुवाको विषयमा छलफल भएको छ । गृह स्रोतका अनुसार मन्त्री निधि र सचिव रेग्मीसँग समन्वय गरेर मात्रै एसपीको सरुवा गर्न प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालले गृहकार्य अघि बढाएका छन् । एसपीको सरुवापछि क्रमशः प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)हरूको सरुवा गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको भनाइ छ । विशेष गरी प्रहरी परिसर काठमाडौं र ललितपुर र अपराध महाशाखामा कसलाई प्रमुख बनाउने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा एसएसपीको सरुवा केही दिनपछि धकेलिएको छ । यस्तै एक वर्षभन्दा बढी समय काममा खटिएका प्रहरी अधिकारीलाई समेत सरुवा गर्न सकेको छैन ।
सचिवस्तरीय बैठकबाट सरुवाको निर्णय हुने भए पनि गृहमन्त्री निधि स्वयंले त्यसमा रुचि देखाएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार चितवनमा विकास खनाल, दिवेश लोहनी, अशोक सिंह र मुकुन्द आचार्यमध्ये एक र पर्सामा गोविन्द साहलाई पठाउन मन्त्री निधिको जोड रहेको छ । एसपी साहलाई पर्सामा पठाउन आईजीपी अर्यालसमेत सहमत भइइसकेका छन् । यसैगरी रूपन्देहीमा रवीन्द्र धानुक सरुवा हुने लगभग सहमति जुटेको स्रोतको भनाइ छ । त्यसैगरी अपराध महाशाखामा केदार रिजाल र काठमाडौं परिसरमा छविलाल जोशी वा धिरु बस्न्यातमध्ये एक एसएसपी पठाउने गृहकार्य अघि बढेको छ । त्यसैगरी काठमाडांै परिसर वा महाशाखामा एयरपोर्टमा रहेका श्याम खत्री तथा ठूले राई र दिनेश अमात्यले पनि दाबी गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं परिसरमा रहेका एसएसपी विक्रम थापाले एक महिनापछि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् भने महाशाखामा रहेका सर्वेन्द्र खनालको नियमित सरुवाकै समय नाघिसकेको छ । काठमाडौं स्थित महानगरीय अपराध महशाखा, मेची अञ्चल कार्यालय, बाग्मती अञ्चल कार्यालय, त्यसैगरी अन्य आकर्षक अञ्चल कार्यालय र एयरपोर्ट तथा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा जान चाहने एसएसपीहरूको दौडधुप चलिरहेकै छ । नुवाकोट, धादिङ र मोरङका प्रहरी प्रमुख फेर्न मन्त्रालयले दबाब दिए पनि ती स्थानमा सरुवा भएका प्रहरी प्रमुखको समयावधि नपुगेका कारण सरुवा नहुने स्रोतले जनाएको छ । त्यसैगरी काभ्रेको प्रहरी प्रमुख राजेशनाथ बास्तोलाको सरुवा हुने भएपछि त्यहाँ जानका लागि एसपीहरूको दौडधुप निकै बढेको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखामा गृहबाट नाम आउने र हटाउने काम तीव्र गतिमा हुन थालेको छ । स्रोतका अनुसार १७ फागुन ०७२ मा सरुवा भएका केही एसपीहरूले पनि जिल्ला प्रमुख पाउने भएका छन् । धनुषाबाट सरुवा भएका रामदत्त जोशीको स्थानमा गएका लालमणि आचार्यको त्यहीँ दरबन्दी कायम हुनेछ । त्यसैगरी सिराहामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले माओवादी अनुकूलको एसपी पठाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका आइतबार कर्मचारी प्रशासन शाखामा सरुवा सूची पुगेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले समय मिलाएर सरुवा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।